कस्तो होला अबको ‘लकडाउन’ ? मोडालिटीको बनाउने जिम्मा तीन मन्त्रालयलाई:: Mero Desh
कस्तो होला अबको ‘लकडाउन’ ? मोडालिटीको बनाउने जिम्मा तीन मन्त्रालयलाई
Published on: २३ बैशाख २०७७, मंगलवार ०२:०४
काठमाडौं : सरकारले गत चैत ११ यता जारी लकडाउन ठाँउ विशेषलाई आधार बनाएर केही लचिलो बनाउने संकेत गरेको छ। कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले लकडाउनले पारेको आर्थिक प्रभाव र कोरोनाको
सम्भावित अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नयाँ मोडालिटीका विषयमा छलफल गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले दिए। छलफल जारी रहेको र मंगलबार पुनः छलफल गरी अबको लकडाउनको मोडालिटीको स्वरुपको मस्यौदा तयार पार्ने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेर निर्णयमा पुगिने विडारीले बताए। ‘कोरोना संक्रमणको परीक्षण उल्लेख्य मात्रामा भइरहेको छ। यद्यपी, तराईका केही क्षेत्रमा संक्रमितको संख्या बढेको छ। लकडाउनपछिको आर्थिक अवस्थालाई पनि हेर्ने र रोगलाई पनि कावुमा राख्न के गर्ने भन्नेमा समीक्षात्मक बैठक जारी छ’,
विडारीले भने, ‘अहिलेसम्म गरेको प्रयास सही दिशामा छन्। अझै पनि दुई दिन प्रदेश र स्थानीय तह, सुरक्षा निकायबाट पनि रिपोर्ट लिने र कसरी जाने भन्नेमा वर्कआउट गरी एउटा मस्यौदा तयार पार्ने अभ्यास जारी छ।’ लकडाउनको अवधि २५ वैशाखसम्म छ। सरकारले अब लकडाउनको मोडालिटीमा परिवर्तन गर्दै ग्रीन जोन, रेड जोन, एल्लो जाने गरी तीन समूहमा देशका भूभागलाई विभाजन गर्ने र क्रमशः लकडाउन खुकुलो पार्दै जाने गरी समीक्षात्मक बैठकमा छलफल भइरहेको समितिमा रहेका एक मन्त्रीले बताए।
उनका अनुसार, गृह, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समन्वय गरी मोडालिटी के-कस्तो बनाउने भन्नेमा खाका तयार पार्ने जिम्मा सोमबारको बैठकले दिएको छ। बैठक पुनः मंगलबार बस्ने र त्यसमा तीन मन्त्रालयको सुझावबारे उच्चस्तरीय समितिमा छलफल हुनेछ। सोमबारको समिति छलफल काठमाडौंमा भने जनसंख्या ठूलो रहेको, परीक्षण कम देखिएकोले तत्काल खोलेर जान नहुनेमा मन्त्रीहरुले छलफल गरेका छन्।
अहिलेसम्मका प्रयास काठमाडौंसहितका देशभरमै सन्तोषजनक देखिए पनि काठमाडौंमा तत्काल नखोल्ने तर अन्य स्थानमा भने त्यहाँको अवस्थालाई हेरेर केही खुकुलो बनाएर जान सकिनेमा समिति बैठकमा छलफल भएको थियो।
दशैमा घर जानेलाई आयो खु‘सिको खबर। मिनरल वा‘टर फ्रि।